Somalia oo xubin buuxda ka noqotay urur caalami oo muhiim ah - Caasimada Online
Home Warar Somalia oo xubin buuxda ka noqotay urur caalami oo muhiim ah
Somalia oo xubin buuxda ka noqotay urur caalami oo muhiim ah
Muqdisho (Caasimadda Online) – Wasiiradda Cadaaladda iyo xeer ilaaliyaasha guud ee Dalalka ku meeysan Suuqa Bariga iyo koofurta Africa ayaa jimcihii ku heshiiyay in Soomaaliya lagu daro urur goboleedka.
Heshiiska Soomaaliya loogu ogolaaday ururka COMESA ayaa socday hal maalin oo ka dhacay Magaaladda Caasimadda u Dalka Zambia ee Lusaka, waxuuna heshiiskaasi wadada u xarayaa in ogolaansho buuxa ay Soomaaliy ka hesho kulan weeynaha dhici doona Sanadka soosocda.
Kulankaasi oo socday muddo hal maalin ah waxaa lagu saxiixay Heshiiska ay Somalia kaga mid noqonayso Mucaahadada Suuqa Guud ee COMESA ayaana qalinka lagu duuqay.
Hadal ka soo baxay Xoghaynta COMESA ayaa lagu sheegay inay Tallaabadaasi timid, kadib, Wada-xaajood ay Dowladda Somalia iyo Dowladaha xubnaha ka ah Suuqa Guud ee COMESA bilowgii isbuucan ku yeesheen caasimadda dalka Zambia ee Lusaka.
Ogolaansha Soomaaliya loo ogolaaday in ay ururka COMESA ku biirto ayaa yimid kadib Wada xaajood ay yeesheen Dowladda Federalka ah ee Soomaaliya iyo Golaha wasiiradda ee COMESA kaasi oo ka dhacay caasimadda Zambia.
Ku biiritaanka Soomaaliya ayaa waxaa uu ururka ka dhigayaa Ururka ganacsi ee ugu weyn Qaaradda Africa oo xubnihiiyu waxay gaarayaan 20 dal.
Ururukaan COMESA waa urur ay ku mideysanyihiin Wadamadda dhaca Bariga iyo koofurta Africa oo suurta galinaya Aag ganacsi oo xor ah, waxana la aasaasay 1994 kii.